သြစတေးလျှ ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက်
သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ်ရဲ့ အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ၀၆:၃၀MT အချိန်မှာ ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. ယခုဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ ယခင်အတိုးနှုန်းအတိုင်းသာမပြောင်းမလဲထားချင်နေပုံရပါတယ်. အတိုးနှုန်းပြောင်းလဲဖို့မရှိနိုင်သော်လည်း ယခုဆွေးနွေးပွဲဟာ အော်ဇီဒေါ်လာ ဈေးကွက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်အတွက် ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်. အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်မှာ hawkishဒေတာ လေသံမာသည့် အတိုးနှုန်းတင်မှုမျိုးဖြစ်ပါက သြဇီဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်. ဗဟိုဘဏ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာအတိုးနှုန်းမတင်ဘဲ လက်ရှိနှုန်းထားအတိုင်းဆက်လက်ထားပါက သြဇီဒေါ်လာတန်ဖိုးကျနိုင်ပါတယ်.